Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya oo kaarkeedii ugu dambeeyay ciyaareysa
Itobiya oo kaarkeedii ugu dambeeyay ciyaareysa
Posted by ONA Admin	/ March 27, 2013
Itobiya marnaba maqarsan inaysan raali ka ahayn inuu dib u dhismo Qaran Somaliyeed oo ka madaxbanaan Yeedhiska Itobiya. Kooxda TPLF ee xukunka Itobiya gacanta ku dhigtay waxay caan ku yihiin siyaasadda –Magooga- ama hoos galinta. Inkastoo aan si sahlan loo odhan karin caalamka ma ogsoonayn qaska Itobiya ay ka wado Somaliya, ama guud ahaan Geeska Afrika, hadana waxaa hubaal ah in garab iyo taageeraba lagu siin jiray Itobiya rabitaankeedii ahaa inay ka taliso aayaha Somaliya, ama noqoto quwadda lagala tashado arimaha Geeska Afrika. Mala odhan karaa waxbaa iska badalay aragtida dawladihii reer Galbeedka ee Itobiya ku tageeri jiray siyaasadeeda ku aadan arimaha Somaliya? Jawaabtu waa Haa balaadhan. Shirkii lagu qabtay London (Halkan Ka Fiiri) ayaana lagu ogaysiiyay Itobiya is-badalkaa markii Meles Zanawi lagu bahdalay.
Su’aasha ku xigta ayaa ah maxaa keenay isbadalkaa? Marka laga yimaado isbadalka guud ee ku yimid aragtida uu ka qabo caalamka gaar ahaan reer Galbeedka la-dagaalanka wixii la odhan jiray Argagixisada caalamiga ah, iyadoo la ogaaday in aanay sax ahayn fikradii horee ay wateen kooxaha asal-raaca ah ee loo yaqaano New-Cons oo muslimiinta oo idil u arkayay inay taagerayaal argagixiso yihiin, taasoo ay Itobiya si fiican u dhex booday una maalgashatay, waxay ogadeen reer-galbeedku in Itobiya ay ka jiraan koox Mafia ahaan u shaqaysta oo danahooda gaarka uu ku jiro in aanay Somaliya ka hanaqaadin dawlad maamuli karta xataa arimaheeda gudaha oo kali ah. kooxdan Mafia-da ah waxay ka shaqaystaan oy gacansaar la leeyihiin dawlad- goboleedyada Somaliya ka hanaqaaday oo gacanta ku haya xeebaha iyo dakadaha laga soo dago, halkaasoo canshuur xad-dhaaf ah iyo tijaaro canshuur la’aan ah ay uga socoto. Sidaa darteed, hadday Dawlad hanan karta badda iyo dakadaha ay dhisanto waxaa ka xidhmaya danahaa oo malaayiin doolaar ay sanadkii ka soo baxaan.
Itobiya waxay adeegsatay asluub dacaayadeed oo muujinaya inay aad u doonayso oo maslaxadeeda qawmiga ah uu ku jiro in Somaliya ka dhisto dawlad xoogan oo hanan karta nabadgalyada iyo xasiloonida dalkaa jaarka la’aha. Waxaan aragnay qoraalka aysoo saartey WAD Itobiya ee caalamka lagu shaaciyay, gaar ahaan shabakadaha Somalida ee muujinaya maslaxadda Itobiya inay ku jirto Somaliya oo yeelata xukuumad xoogan oo soo celisa xasiloonidii iyo kala dambayntii. (Halkan Ka Khri).
Middan waa badeecada ay Itobiya ka iibisay caalamka iyo Somalida qaarkood gaar ahaan kuwa danta ay ka gashay qaska Itobiya ay ka waday Somaliya. Hasa ahaatee dadka yaqaana kooxdan xukunka Itobiya gacanta ku dhigtay waxay ogyihiin laba wajiile nimada kooxdaa. In aanay Mafia-da TPLF waligoodba raali ka ahayn inay dhalato Xukuumad Somaliyeed oo ka horiman kara danaheeda dhabta ah (ma’aha midkan beenta ahee la huwinayo hadafka dhabta ah), waxay ku cadyihiin falalka ay Itobiya ka fuliso Somaliya laga soo bilaabo burburkii Qaranka 1991 ilaa maantadan aanu joogno ee 2013. Itobiya taaktikada ay adeegsato waxay ku salaysan yihiin laba qodob;
1- In aanay marka hore cadaawad u muujinin oo aanay ka horimaanin wixii u muuqda dhismo Qaran oo laga hirgalinayo Somaliya.
2- Inay ka shaqayso (Si hoos ahaaneed) siyaabihii ay ku burburin lahayd wixii dhismay oy caalamka maqashiisay inay taageersan tahay.
Waliba inta badan waxay sii saadaalisaa waxa iman doona, ka dibna waxay u sii diyaarisaa habkii ay kaga hortagi lahayd, taasoo ah inay sii abuurta koox Somali ah oy ku burburiso. Saddex marxaladood ayay ka soo gudubtay. Maantana waxay taagan tahay marxaladii 4aad ood moodo inay tahay midii ugu dambaysay hadday ku guulaysato inay ku kala dirto xukuumadda M/W Xassan Culusow.
1- Adeegsigii Dagaal-Oogayaasha (War Lords) oo midba mid ay madaxa ugu dhufanaysay.
2- Xukuumad Magac-u-yaal ah oy kula soo dagaalantay koox hanaqaaday oy u aragto inay leeyihiin aragti qawmi/diini ah oo iyada ka madax banaan.
3- Dawlad Goboleed (SL ama PL iwm.) ay ku taageerto la dagaalanka iyo burburinta wadajirka iyo hanaqaadka Qaran midaysan.
4- Kaarka ugu dambeeya oo ah Kooxda Al-Shabaab oo Itobiya/TPLF ay ugu talagaleen inay ku burburiyaan dhismo Qaran Somaliyeed oo dambe inuu ka hana qaado Muqdishu.
Maqaalkan hoose waxaa qoray aqoonyahan Itobiyaan ah oo aad ugu dhuun-duleela xidhiidhka ka dhexeeya kooxda TPLF iyo Al-Shabaab. (Akhri). Mana aha arin ka qarsoon shacabka Somaliyeed ee caadiga ah. Carqaladayntii ay ku qaaday Itobiya markii dawladda Kenya ay ku talaabsatay inay Shabaabka ka saarto agagaarka Kimaayo, wuxuu caalamka u ifiyay arima badan oo ka qarsoonaa.
Waxaan horey ugu sheegnay dadweynaha Somaliyeed in hubka iyo rasaasta ay ku dagaalamayaan Al-Shabaab ay ka helaan Itobiya. Arintaana dad badan oo Somali ah ayaa si dhab ah u ogsoon. Maqaal aan ku qornay ONA oo cinwaankiisu ahaa – U yeedha Itobiya Jinni ninkii keena bixiyee – ayaan kaga faaloonay arintaa.
Maanta waxay Itobiya ciyaaraysaa Kaarkii ugu dambeeyay oo ah inay gacanta u galiso kooxda Al-Shabaab gobolada Bay iyo Bakool iyo goboladii kalee suurtagal ahba. Taaktiik sahlan ayayna adeegsanaysaa, oo ah inay ka baxayso goobihii ay ka joogtay goboladaa iyadoon ogaysiinin dawladda ama ciidanka AMISOM ee lagu taageerayo xukuumadda, ka dibna ay si dhibyar u soo galaan Shabaabka goobahaa ay ka baxayaan iaygoo waliba hub iyo saanad loo sii dhigay xeryahaa. Sidaa ayuuna qas iyo burbur horleh uga bilaaban doonaa Somaliya ilaa ay xukuumadda M/W Xassan Culusow ay ugu guguurato Itobiya ama sidaa ay ku galbato.
Waa meeqaal aad uqiimo badan,waxa uu xambaarsan yahay waa xaqiiqada dhabta ah Ethiopia marna raali kama ahayn soomaliya oo Dawlad fiicani kadhalato,hadana raali kanoqon mayso maxaayeelay maslaxadeeda gaarka ah kuma jiro soomaliya oo Dawlad dhexe yalata
Mahadsanidin. Sii wada meeqaaladaas bal in ilaahay umada soomaaliyeed wax kufahansiiyo